नयाँ शक्तिले ‘असल राजनीतिका लागि एक महिना’ अभिया थाल्ने – Himalitimes
२०७५ माघ ८ १६:०१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले असल राजनीतिका लागि एक महिने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
‘असल राजनीति र समावेसी विकासका लागि जनसंवाद’ नारासहित नयाँ शक्तिले पुष्पलाल लोकमार्गमा अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । अभियानमा एक महिनाभरी नै पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सहभागी हुने बताइएको छ ।
अभियानमा पार्टीका संयोजक भट्टराईले मध्य पहाडी र पुष्पलाल लोकमार्गको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जनसम्वाद यात्रा गर्नेछन् । ‘नयाँ शक्तिको लुम्बिनी बैठकको वैचारिक कोशेढुंगापछि यसलाई सांगठनिक कोशेढुंगा बनाउँदैछौं,’ अभियानको उद्देश्यबारे चर्चा गर्दै संयोजक डा. भट्टराईले बताएका छन् ।
पूर्वमा पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म १७ सय ७६ किलोमिटरको पुष्पलाल लोकमार्ग आसपास सञ्चालन हुने अभियानका क्रममा स्थानीय तहका समस्या र सम्भावनाका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरुसँग अन्तरक्रियारछलफल गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले स्थानीय तहदेखि नै असल राजनीतिका लागि एउटा जागरणको आवश्यकता देखिएकोले अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।
प्रस्तावित तीनजना राजदूतको नाम अनुमोदन